အိုကေ, သေချာ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်တစ်ဦးဟိုတယ်ထဲမှာလိုတူ privacy ကိုမရကြလိမ့်မည်. ရေချိုးခန်းနဲ့တူအသိုင်းအဝိုင်းဒေသများရှိပါတယ်, မီးဖိုချောင်, Lounge ဒေသများ, နှင့် workstations. သို့သျောလညျး, ဤအကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏ လူတွေကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း. သင်အသိုင်းအဝိုင်းဒေသများရှိထွက်ဆွဲထား အကယ်. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှခရီးသွားများအတွက်တွေ့ဆုံရန်နိုင်. ထိုအပင်သင်သည်သင်၏အတွက်ဖြည့်ဆည်းလူတို့နှင့်အတူအဓိပ္ပါယ်ရှိသောခင်မင်ရင်းနှီးစတင်ရန် ခရီးသွားမှတ်တမ်း အသစ်အနာဂတ်ခရီးသွားလုပ်သူများရှိ, လွန်း! နေထိုင်ရန်အဆောင်များအတွက်အလုပ်လုပ်သူကိုလူတွေကများသောအားဖြင့်ပျော်စရာနှင့်လူပေါင်းကောင်းသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏, ဒါကြောင့်ရောနှောသူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့ကောင်းပါတယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)